Dhaabbatni Duula Sadarkaa Addunyaa, Meeshaa Niyuukilaraa addunyaa irraa dhabamsiisuuf hojjetu, kan “ICAN” jedhamu, har’a, badhaasa Noobelii, ka bara 2017 badhaasame.
“Meeshaaleen Niyouukilaraa baroota keessa dabarre caalaa bara itti nageenya Addunyaa kanaaf sodaachisaa tahe keessa jirra” ka jedhan – hoogganaan Koree Badhaasa Noobelii biyya Noorwey keessa maadheffatee – Beerit Reeyis-andersen.
Prezidaantiin Yunaayitd Isteets – Donaald Traamp, waa’ee dandeettii meeshaa Niyuukilaraa Iraanii fi Kooriyaa Kaabaa, ennaa doorsisuutti jiranitti, badhaasamuun dhaabbata farra meeeshaa niyuukilaraa kun immoo har’a dhaga’ame.
Dhaabbatichi – ICAN jedhamu kun, meeshaalee Niyuukilaraa kamitti iyyuu gargaaramuun badisa guddaa inni dhala namaatti fidu hubachiisuuf hojii guguddaa hojjeteef badhaasamuu isaa dubbata – Koreen Noobelii Addunyaa.
ICAN gamtaa dhaabbatoota ka mootummaa hin ta’iin biyyaota dhibbaan lakkaawamanii irraa walitti-dhufanii yoo tahu, akka biyyoonni addunyaa walii-galtee dhabamsiisa meeshaa Niyuukilaraa ka Tokkummaa Mootummootaan tumameetti bulan jajjabeessuutti bobba’ee hojjeta.